Winter NWEA MAP Testing | Battle Creek Public Schools
Winter NWEA MAP Testing
Jan 8, 2021 | District, Ann J. Kellogg, Dudley STEM, Fremont, LaMora Park, Post-Franklin, Valley View, Verona, Northwestern Middle School, Springfield Middle School, BC STEM Innovation Center, Parent University
Testing for remote and Virtual Academy students K–8 to take place between January4and January 26.
During the coming weeks, BCPS will be administering the state-required NWEA MAP Growth Tests for all students in grades K–8. By now, students should be familiar with this assessment, which is given at the start of each school year beginning in kindergarten. With students learning remotely or through the Virtual Academy this year, things will lookalittle different than in years past. Testing for all BCPS students in grades K-8 will take place between January4and January 26, 2021. Both remote learners and Virtual Academy students will be taking the tests online, administered by their teachers.
*Please note, students in grades 9–12 will not be taking the NWEA MAP Assessment.
Bearcat Bytes: NWEA MAP Help Video for Grades 6-12
Bearcat Bytes: Video de ayuda de NWEA MAP para los grados 6-12
NWEA MAP Testing for K-5 Virtual Families Presentation (PDF)
NWEA MAP Testing for K-5 Virtual & Remote Families Presentation (Video) Con interpretación al español
This test helps provide educators with an honest assessment of each student’s understanding in reading and math so that we can better support their growth throughout the year. The test does not affect your student’s grades, but it is important for them to try their hardest so that we can get an accurate assessment of their progress. If you are experiencing connectivity issues withaBCPS-issued device, please contact our Helpdesk team at helpdesk@battlecreekpublicschools.org.
We know that “virtual” testing is not ideal, but we haveaplan in place to ensure accurate testing and provide you and your student with support. Testing will take around one to two hours total and will be monitored by one of your student’s teachers, who have been specially trained on how to administer these tests. We recommend havingaparent or caregiver stay nearby during testing to help out with any potential technology issues, particularly for younger students. But parents and family members should not help students answer questions during the test and will not be required to be present during testing. We will use the results of these tests to make sure the right supports or enrichment opportunities are in place academically for all students, so it is very important not to help your child with any test answers. Below are other ways that you can support your student to ensure the ideal testing environment.
Make sure your student’s device meets the testing requirements here.
Help your student practice the test at practice.mapnwea.org (Username: grow; Password: grow).
For families withaK-5 student: Watch the recording of our K–5 NWEA MAP Testing information session.
Make sure you are connected to the Internet or toahotspot.
Make sure your student’s Chromebook or device is fully charged before testing begins.
Close any unnecessary browsers, tabs and programs to ensure the testing program can run smoothly.
Disable pop-up blocking on the internet browser.
Help your student log into the testing platform (teachers will provide instructions for how to do this).
Bonus tip: If you are having issues due to pop-up blocking in your web browser, us this link: https://test.mapnwea.org/#/nopopup
For more information, please reach out to your student’s teacher via email or through their online learning platform.
ရပ်ဝေးမှသင်ကြားမှု (remote) နှင့် အွန်လိုင်းပညာရေးသင်ကြားမှု (Virtual Academy) တွင်တက်ရောက် ပညာသင် ကြားနေသော (သူငယ်တန်း မှ ၈ တန်း)ကျောင်းသားများ သည် ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက် နှင့် ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက်တို့တွင် စာမေးပွဲဖြေကြားခြင်းရှိပါမည်။
လာမည့်ရက်သတ္တပတ်အတွင်း၊ BCPS မှ (သူငယ်တန်း-၈)တန်းကျောင်းသားများအတွက် ပြည်နယ်အစိုးရမှ တောင်းဆိုချက်အရ၊ NWEA/MAP NortWest အကဲဖြတ်အဖွဲ့၏ပညာရေးတိုးတက်မှုတိုင်းတာချက် သိရှိနိုင်ရန်၊ စာမေးပွဲဖြေဆိုမှာဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းစာမေးပွဲကိုတာဝန်ရှိသူများမှ စီမံခန့်ခွဲပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။ ပထမတန်း သို့မဟုတ် ၎င်းအတန်းအထက်တက်ရောက်နေပြီး‌ သောကျောင်းသားများအနေဖြင့် သူငယ်တန်းစတက်ချိန်ပညာသင်နှစ် အစ တွင်ပြုလုပ်နေကျဖြစ်သောကြောင့် ဤအကြောင်းအရာကို မိသားစုများအနေဖြင့်အကျွမ်းဝင်ပြီးသားဖြစ်မှာဖြစ်ပါ သည်။ သို့ရာတွင် ဒီပညာသင်နှစ်သည် လူကိုယ်တိုင်ကျောင်းတက်သည်ဖြစ်စေ၊ အွန်လိုင်းပညာရေးသင်ကြားမှု၌ တက်သည်ဖြစ်စေ၊ ရပ်ဝေးမှသင်ကြားသည်ဖြစ်စေ၊ အခြားနှစ်များနှင့်မတူဘဲ ခြားနားမှုရှိမှာဖြစ်ပါသည်။ BCPS တွင် ရပ်ဝေးမှသင်ကြားမှု နှင့် အွန်လိုင်းပညာရေးသင်ကြားမှု နှစ်ခုစလုံးတွင်တက်ရောက် ပညာသင်ကြားနေသော (သူငယ်တန်း မှ ၈ တန်း)ကျောင်းသားများ သည် ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက် နှင့် ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် တို့တွင် စာမေးပွဲဖြေ ကြားခြင်းရှိပါမည်။ သင်ကြားခြင်းစနစ် နှစ်မျိုးတွင်တက်ရောက်နေသောကျောင်းသားများအားလုံး၏ စာမေးပွဲဖြေဆိုခြင်းသည် အွန်လိုင်းမှဖြေဆိုမှာဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့၏ ဆရာများမှ စီမံခန့်ခွဲမှာဖြစ်ပါသည်။
*(၉-၁၂) တန်းကျောင်းသားများသည် ဤ NWEA MAP စာမေးပွဲဖြေဆိုရမှာ မဟုတ်ကြောင်းသိစေလိုပါသည်။
ဤစာမေးပွဲသည် ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီ၏ စာဖတ်ခြင်း နှင့် သင်္ချာဘာသာရပ်တို့တွင် မည်မျှတတ်ကျွမ်းမှုရှိ ကြောင်းရိုးသားစွာသိရှိပြီးနောက်၊ ဆရာ/မများမှမည်သို့ပံ့ပိုးရမည်ဆိုတာသိရှိပြီးကူညီရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာမေးပွဲ ဖြင့် ကျောင်းသား၏ ရမှတ်အဆင့်ကိုမထိခိုက်စေပါ။ သို့ရာတွင် သူတို့၏ တိုးတက်မှုကို တိကျမှန်ကန်စွာ အကဲ ဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားကြရန်အရေးကြီးပါသည်။ အကယ်၍သင့်အနေဖြင့် BCPS- စက် ပစ္စည်းကိရိယာချို့ယွင်းမှုမျိုးကြုံရပါက၊ helpdesk@battlecreekpublicschools.org သို့ အကူအညီတောင်းခံနိုင် ပါသည်။
အွန်လိုင်းမှတဆင့် စာမေးပွဲပြုလုပ်ရခြင်းသည်အကောင်းဆုံးစံပြမဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင် ဤစာမေးပွဲ၏ရလဒ် အဖြေ မှာ အမှန်ကန်ဆုံး နှင့် အတိကျဆုံးဖြစ်ကြောင်း မိသားစုများခံစားနိုင်ရန် ပံ့ပိုးကူညီသော အစီအစဉ်များရှိပါသည်။ စာမေးပွဲဖြေဆိုချိန်မှာ တစ်နာရီ၊ နှစ်နာရီ ဝန်းကျင်ခန့်ဖြေဆိုရမည့်မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ ဤစာမေးပွဲဖြေဆိုရာတွင် ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီကို အထူးသင်တန်းပေးထားသောဆရာများမှ စီမံအုပ်ချုပ်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။ မိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူများအနေဖြင့် သင့်ကလေးစာမေးပွဲဖြေဆိုနေစဉ် သူ့အနားတွင်ရှိနေပေးဖို့ ထောက်ခံချက် ပေးလိုပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စာမေးပွဲဖြေဆိုနေစဉ် နည်းပညာဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးရန်၊ လိုအပ်ကောင်းလို အပ်နိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် မိဘများနှင့်မိသားစုများမှ မေးခွန်း၏ အဖြေကိုကူညီပေးရန်မဟုတ်ပါ။ ကျောင်းသား၏ အဖြေရလဒ်အပါ်မူတည်ပြီး၊ ဆက်လက်ပံ့ပိုးရန် နှင့် လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းပေးရန်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်သော ကြောင့်၊ ကျောင်းသား၏အခြေအနေမှန်ရလဒ်သိရှိရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ကလေး၏အမှန်တကယ်ရလဒ် သိရှိခြင်းသည်အရေးကြီးသောကြောင့်၊ စာမေးပွဲဖြေဆိုချိန်တွင်အဖြေရဖို့ မကူညီပါနှင့်။ သင့်အနေဖြင့်ကူညီနိုင် သည့်အခြားနည်းလမ်းများရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
စာမေးပွဲ မဖြေဆိုမှီတွင် (Before test day:)
သင့်ကလေး၏ စာမေးပွဲဖြေဆိုရာတွင် လိုအပ်မည့် ကိရိယာများ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိဤနေရာတွင် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည် here.
သင့်ကလေးသည် ဤစာမေးပွဲနှင့်ပတ်သက်သည့်သင်ခန်းစာများကို ဤနေရာတွင် လေ့ကျင့်ပေးနိုင်ပါ သည် practice.mapnwea.org (အသုံးပြုသူ၏အမည်- Username: grow; နှင့် လျှို့ဝှက်သင်္ကတ- Password: grow) စသည့်ဖြင့်။
အွန်လိုင်းပညာရေး (Virtual Academy) တွင် သူငယ်တန်း မှ ၅ တန်းတက်ရောက်နေသောကျောင်းသားများ- ဤစာမေးပွဲနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကို ဗီဒီယိုအသံဖြင့်လွှင့်တင်ထားပါ သည်။ K–5 NWEA MAP Testing information session.
စာမေးပွဲဖြေဆိုသောနေ့တွင် (On test day)
အင်တာနက် သို့မဟုတ် hotspot တို့နှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိမရှိသေချာစေပါ။
သင့်ကလေး၏ ကွန်ပြူတာ (Chromebook) သို့မဟုတ် ကိရိယာများ စာမေးပွဲ မစမှီ ဓာတ်အားပြည့် မပြည့် သေချာစစ်ဆေးပေးပါ။
စာမေးပွဲဖြေဆိုမှုအစီအစဉ်ချောမွေ့စေရန်၊ မလိုအပ်သော browsers များအသုံးပြုခြင်း၊ အခြားပရိုဂရမ် များအသုံးပြုခြင်းတို့ကိုရှောင်ရှားပါ/ပိတ်ထားပါ။
အင်တာနက်ဝက်ဆိုက်စာမျက်နှာကြည့်ရှုသူ (Browser) ပေါ်ရှိ ပိတ်ဆို့မှုများကို ပိတ်ထားပါ။
သင့်ကလေး၏ စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့် စာမျက်နှာရောက်နိုင်ဖို့ကူညီပေးပါ။ (ဘယ်လိုလုပ်ရ မည်ဆိုသည့် အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များကို ၎င်းတို့၏ဆရာ/မများမှ ညွှန်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်)။
အပိုဆု- အကယ်၍ သင့်ရဲ့အင်တာနက်ဝက်ဆိုက်စာမျက်နှာ (web brower) ဖွင့်ရန်အခက်အခဲရှိပါက၊ ဤဝက်ဆိုဒ်တွင် ဖွင့်နိုင်ပါသည် https://test.mapnwea.org/#/nopopup။
အကယ်၍ အသေးစိတ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ သင့်ကလေး၏ ဆရာထံသို့ အီးမဲလ် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့သင်ကြားခြင်း၏ အွန်လိုင်းပဘက်ဖောင်း မှတဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။